यसपालिको लक्ष्मीपूजामा कति मेगावाट विद्युत प्रयोग भयो त ? - प्रशासन प्रशासन
यसपालिको लक्ष्मीपूजामा कति मेगावाट विद्युत प्रयोग भयो त ?
प्रकाशित मिति : 10 November, 2018 4:45 pm
काठमाडौँ । यस वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन देशभर घरायसी ग्राहकले कूल एक हजार १०५ मेगावाट विद्युत् प्रयोग गरेका छन्।
देशभर कुनै पनि स्थानमा विद्युत् अवरोध नभएको र नियमित रुपमा सहज तवरले विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। बत्ती, रङ र फूलको पर्वलाई आफूहरुले मेहनतका साथ सफल बनाएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी दिनमा समेत यस्तै साथ र सहयोग उपभोक्ताबाट प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।रासस
Tags : लक्ष्मीपूजा विद्युत